Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay Hadii Uu Leo Messi Kusoo Bilaabayo Kulanka Inter Milan Ee UCL %
Champions LeagueLatest Sports News
By Abdirahman	 On Nov 6, 2018
Ernesto Valverde, ayaa sheegay inay suuragal ay tahay in Lionel Messi, uu kusoo bilowdo kulanka ay caawa ka dheelayaan Champions League, kaasi oo ay wajahayaan kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Inter Milan.
Dheesha dhex-mareysa naadiyaddani oo ah lugta labaad ayaa waxaa lugta koowaad 2-0 ku adkaatay Bluagrana, laakiin Valverde ayaa daboolka ka qaaday in kulankani ay dheeli doonan shax weerar ah.
Mar uu la hadlayey xaaladda Messi ayuu yiri: “Isaga waa dheeli karaa, laakiin inaga ma hubno taasi. Isaga wuxuu ku muujiyay tababarka waxyaabo fiican, balse isaga ma dhigi doono goob uu mar kale ku dhaawacmayo.
“Hadii aanan dooneynin inaan isaga ka hadlo kadibna aniga waxaan sheegayaan waxyaabo xasiloon, balse inaga waan xasiloon nahay, mana dooneyno inaan isaga gelino halis,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Inaga waxaan isku deyi doonaa inaan ku dheelno qaab weerar ah, waana naqanaa qaabka aan udheelayno.
“Inter Milan waxay sidoo kale tahay taasi, marka waxaan ubaahan nahay bedal la heli karo. Kulanka waa mid muhiim ah, labadeena, waxaana nafsadeena dhigi doonaa meesha ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
“Inaga waxaan isku deyi doonaa inaan muujino kulankaan awodeena, maxaa yeelay ma ahan wali waxaan rabno.
“Sheydadu waxay usocdaan kuwa wanaagsan, balse waxaan ku dhibtoonay La Liga iyo Champions League,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Ernesto Valverde, hogaamiyaha camaaliqada La Liga ee wadanka Spain.
Champions LeagueErnesto ValverdeInter Milan v Barcelona
Maamulaha Kooxda PSG Oo Ka Warbixiyay Xaalada Ciyaartoy Shaki Laga Gelinayo Kulanka Napoli
Pep Guardiola Oo Ka Jawaabay Eedaynta Ku Saabsan In Guulaha Man City Ay Sabab U Tahay Bixinta Lacago Badan